Kedu ohere kacha mma ịchọta mkpụrụokwu Amazon?
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ azụmahịa gị na Amazon, ọ dị mkpa ịmepụta nyocha ọchụchọ zuru ezu. Ihe ọzọ ịchọrọ ịchọta ọchụchọ ịchọtara, nke dị elu ị ga-agbadoo na SERP Amazon na ọtụtụ okporo ụzọ ndị ọzọ ị ga-adọta. Inye oge gị iji nyochaa usoro ọchụchọ kachasị mkpa na niche gị nwere ike ime ka azụmahịa gị dịkwuo elu ma bulie ọnọdụ ngwaahịa gị maka usoro kachasị achọ na Amazon - baumwollstoff ballerina. Otú ọ dị, ọ gaghị ezuru naanị chọpụta ihe kwesịrị ekwesị maka ọchụchọ ọchụchọ gị; ịkwesịrị iji ya mee ihe n'ụzọ amamihe. Amazon nyere gị ohere a.
E nwere ma ọ dịkarịa ala atọ ngalaba ebe ị nwere ike itinye isiokwu gị ezubere iche - aha, nkọwa na okwu mgbochi. Ihe ndị a niile dị mkpa na ụfọdụ ikike, ma akụkụ kachasị mkpa ma dị n'okpuru nke ndepụta bụ aha ngwaahịa ahụ. Ọ nwere ikike dị oke elu maka ndepụta. Ọ bụrụ na ịnwe aha isiokwu-ruru, ị ga-enwe ike ịkwado maka ọtụtụ ajụjụ gbara ajụjụ. O nwere ike ịbụ na ị kpọtụrụ aha ngwaahịa na ogologo na isiokwu dị na Amazon. Dị ka a na-achị, utu aha ndị dị otú ahụ dị mma karịa Amazon karịa ihe ndị dị mkpirikpi. N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ọdịiche dị ukwuu n'etiti Amazon na Google kachasị mma akụkụ. Mgbe Google na aha gi kwesiri iburu oke ma kwuputa isi ulo akwukwo gi, na Amazon aha gi na-eje ozi iji gosiputa ihe omuma banyere ahia gi dika o kwere mee. Ndị ọrụ adịghị adị ka ogologo ahịrịokwu, mana Amazon A9 algorithm nwere ike ịba uru na ya. Ya mere, n'inwe utu aha bara uru, a ga-edepụta ngwaahịa gị maka okwu ọchụchọ dịgasị iche.
Ọ bụ ezie na inwe nnukwu aha dị mkpa, nke ahụ bụ nanị ọkara nke agha ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ọkwa dị elu maka ụdị ọchụchọ ọ bụla a chọrọ, ahịa ga-ekesa site na ndepụta iji gosi Amazon na ndepụta ngwaahịa gị dị ezigbo mkpa maka okwu ndị a. Ọ bụ ya mere na n'isiokwu a, anyị ga-atụle otú ị ga-esi mee nchọpụta isiokwu na ụdị ọrụ ọkachamara ma mee ka amaokwu Amazon gị dị oke mma..
Nchọpụta ọchụchọ Amazon na nchịkọta ndepụta
Dịka data nchịkọta akụkọ, otu ụzọ atọ nke ọchụchọ ọ bụla na-amalite na nzụpụta azụmahịa Amazon. Ọ bụ nzụlite jupụtara na asọmpi na ọtụtụ nde dị iche iche. Ọ bụ ya mere na ọ bụghị ebe kachasị mma iji chọpụta ihe ọhụrụ. Amazon nyocha na-atụ anya ka ihe nchoputa na-apụta ozugbo na ndepụta nke ngwaahịa kachasị mkpa ma dị mma. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji pụta n'elu ndepụta ahụ mgbe ndị ahịa gị nwere ike ịchọta okwu ọ bụla nke metụtara ngwaahịa gị.
Ụkpụrụ dị iche iche nwere ike inyere gị aka ịkwado elu na nsonaazụ ọchụchọ Amazon, gụnyere ọnụọgụ gị na njirimara nke nyocha gị, akụkọ ọdịnala Amazon gị, ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa dị mma, ọnụ ọgụgụ ndị ahịa, nkwado ndị ahịa, na ihe dị mkpa maka ngwaahịa gị bụ ajụjụ ọchụchọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime akụkụ ndị a chọrọ oge na mgbalị dị mkpa, nchịkọta nhọrọ Amazon gị nwere ike ịchịkwa gị ozugbo.
Olee otú ịchọta isi okwu maka Amazon nyochaa njikarịcha?
E nwere ụfọdụ ụzọ dị iche iche iji chọpụta kpọmkwem okwu ndị ị ga - agụnye na ndepụta gị iji mezuo mkpa gị maka ajụjụ gbara ajụjụ a na - ajụkarị.
E nwere ụzọ abụọ ka ị nwere ike isi mee nchọpụta nyocha - aka na akaghị aka. Nkebi nke ikpeazụ bụ nke a na-ejikarị eme ihe n'oge anyị n'ihi na ọ na-azọpụta oge dị ukwuu ma na-enye nsonaazụ kachasị mma dabere na nchọpụta niche zuru oke ahịa na nyocha nchụso.
Ọ bụ ya mere m ga-eji nye gị ndụmọdụ ka ịhọrọ ọrụ ọkachamara nke ngwa ngwa maka ịga nke ọma na-agba ọsọ mgbasa ozi Amazon. Site na ngwa ngwa nyocha nke kachasị dị irè, apụrụ m ịkọwa ndị na-esonụ - Google Planner, Amazon Keyword Planner and Jungle Scout.